Lix ka mid ah tobankii magaalo ee aduunka ugu wanaagsan ee loo raro waxay ku yaalaan USA
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka kala duwan » Lix ka mid ah tobankii magaalo ee aduunka ugu wanaagsan ee loo raro waxay ku yaalaan USA
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • kariska • dhaqanka • Education • Entertainment • Wararka Fashion • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Sports • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Lix ka mid ah tobankii magaalo ee aduunka ugu wanaagsan ee loo raro waxay ku yaalaan USA.
Daraasadu waxay falanqaysay arrimo inta badan la tixgeliyo marka la go'aaminayo halka loo guurayo, oo ay ku jiraan qiimaha guryaha, qiimaha nolosha, celceliska mushaharka, xaaladaha cimilada, tirada makhaayadaha iyo meelaha cagaaran, xawaaraha internetka iyo rajada nolosha.
Meesha ugu jaban ee loo rari doono waa Istanbul, Turkey halkaas oo celceliska qiimaha nolosha sanadku uu yahay $17,124 kaliya.
Basel, Switzerland waa magaalada ugu qaalisan ee loo guuro maadaama qiimaha nolosha sanadkii uu yahay $72,169.
Dubai waa meesha ugu wanaagsan ee loo raro haddii aad raadinayso inaad u guurto cimilo wanaagsan, maadaama ay keentay 10 kaamil ah.
Cilmi-baaris cusub ayaa leh ayaa shaaca ka qaaday meelaha aduunka ugu fiican ee loo guuri karo, lix magaalo oo USA ah ayaa ku jira 10ka sare.
Austin, Texas waxaa loo magacaabay meesha lambarka koowaad ee loo raro, iyadoo Charleston iyo Los Angeles sidoo kale kaalinta shanaad ee ugu sareysa.
10ka meelood ee ugu sareeya ee loo raro aduunka
Rank dareenka Celceliska heerkulka (°C) Celceliska qiimaha guriga m2 Celceliska mushaharka bishii Qiimaha nolosha bishii (qoyska afar ka kooban) Tirada makhaayadaha Tirada meelaha cagaaran Xawaaraha intarneedka (Mbps) Waayeelka nolosha score / 10
1 Austin, Mareykanka 20.4 $ 4,043 $ 5,501 $ 3,121 3,503 47 87.50 79 6.02
3 Charleston, Mareykanka 19.3 $ 4,040 $ 4,346 $ 3,620 646 19 106.50 79 5.68
7 Miami, Mareykanka 24.6 $ 4,119 $ 3,777 $ 3,887 809 38 72.00 79 5.47
8 Muscat, Cumaan 27.3 $ 1,867 $ 1,899 $ 2,326 566 2 0.99 78 5.40
10 Las Vegas, Mareykanka 20.3 $ 2,550 $ 3,631 $ 3,137 4,524 16 20.00 79 5.36
Magaalada ugu fiican aduunka ee loo guuro waa Austin, TX, Mareykanka. Austin ayaa leh xawaraha internetka ee saddexaad ee ugu fiican magaalo kasta marka loo eego qiimeynta, isagoo jooga 87.5 Mbps. Intaa waxaa dheer, magaaladu aad ayay ugu dhibco badan tahay marka loo eego celceliska heerkulka (20.4°C), iyo celceliska mushaharka bisha oo dhan $5,350.
Haddii aad ka fekereyso inaad u guurto meel ka baxsan USA, magaalada labaad ee ugu dhibcaha badan Tokyo ee Japan. Tokyo waxay si fiican ugu dhibco badan tahay tirada makhaayadaha iyo meelaha cagaaran. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay celceliska celceliska nolosha, iyadoo dadka deggan ay ku nool yihiin 84.
Charleston, South Carolina waa magaalada saddexaad ee ugu wanaagsan ee loo raro adduunka. Mid ka mid ah qodobbada ay ku dhaaftay waa xawaaraha internetka, celcelis ahaan waa 106.5 Mbps, taasoo la macno ah inay ilaa hadda tahay tan ugu dhakhsaha badan magaalo kasta oo liiska ku jirta.
Inkastoo San Francisco loo magacaabay kaalinta 9-aad ee ugu wanaagsan ee loo guuro, waxaa sidoo kale la ogaaday inay tahay magaalada 6-aad ee ugu qaalisan ee loo guuro adduunka, iyadoo New York ay ku jirto kaalinta 5-aad. Qiimaha sanadlaha ah ee nolosha San Francisco waa $54,499, halka qiimaha nolosha New York uu yahay $60,525.
Haddii raritaan xeebeedku ay ka sii badan tahay dareenkaaga, Daytona Beach waa meesha ugu fiican ee loo raro USA iyo meesha 6aad ee ugu fiican ee loo guuro aduunka, oo ay si dhow ugu xigto Miami.
Basel, Switzerland waa magaalada ugu qaalisan ee loo guuro maadaama qiimaha nolosha sanadkii uu yahay $72,169, taas oo ka badan $33,568 sanadkii in ka badan celceliska qiimaha nolosha sanadlaha ah oo ah $38,558.
Meesha ugu jaban ee loo rari karo waa Istanbul halkaas oo celceliska qiimaha nolosha sanadku uu yahay $17,124 kaliya. Tani waa $55,045 in ka yar sannadkii loo guuro Basel, iyo $21,434 ayaa ka yar celceliska.
Dubai waa meesha ugu wanaagsan ee loo raro haddii aad raadinayso inaad u guurto cimilo wanaagsan, sababtoo ah waxay keentay 10 kaamil ah. Celceliska heerkulka Dubai waa 28.2 darajo Celsius, waxaana jira 68mm oo roob ah sannadkii.
Magaalada Qatar ee Dooxa waa meesha ugu sarreysa ee loo raro oo ku taal xeebta, magaaladan waxay dhalisay 7.53/10. Heerkulka biyaha ee Doha waa 24.83 darajo celcelis ahaan, sidoo kale waxay leedahay mushahar sare oo dhan $55,096.
Michael Roberts wuxuu leeyahay,
Nofeembar 17, 2021 at 01: 10
Ma hubo cidda cilmi-baadhistan samaysay, laakiin waayo-aragnimadayda qurba-joog Australiyaanka ah oo dibadda ku noolayd sannado badan waa wax aan macno lahayn, oo khilaafaya qayb kasta oo kale oo cilmi-baaris ah oo aan ku arkay mawduuca! Sida iska cad cilmi-baarayaashu kuma dhibin SE Asia, Australia ama New Zealand.